Malezia: Tratry ny tondradrano ny faritra avaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2010 8:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Français, বাংলা, English
Tsy ela akory izay dia tratry ny tondradrano ny faritra avaratr'i Malezia ao Kedah, Perlis sy Kelantan, nitarika fanalàna tamin'ny tranony ireo olona tokony ho 40.000 eo ho eo.
Ny fari-piadidian'i Kedah no tena voa mafy indrindra, ary ilay vehivavy mpitoraka bilaogy Noor Azlina Abdul Samad K, izay isan'ireo olona nafindra, dia nanoratra:
Tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra nandao ny tranonay izahay ny alin'ny Alarobia lasa teo, satria efa metatra vitsy sisa no tsy nidiran'ny ranobe tao an-tranonay. Notapahan-dry zareo daholo ny famatsian-drano ho an'ny manodidina tamin'io andro io ary efa teo an-dàlana hanapaka ny herinaratra koa tamin'io alina io. Noho izany no nahatsapanay fa tokony hiala faran'izay haingana indrindra izahay. Nangoninay haingana ny entanay, izaho, ny reniko ary ny nenitoako, ary izay fanananay mba zaka dia nampiakarina tamin'ny toerana avo tao an-trano. Tsy vitako ny hanavotra ny zavatra rehetra. Izay azoko natao no nataoko ary nankiniko amin'Andriamanitra ny sisa. Be loatra ny tokony natao, kely ny fotoana nefa haingana be ny fidiran'ny rano. Maro ny olona no tsy nanampo fa ho ratsy toy izany ny fandehany.
Ny zavatra tena iriko izao dia hoe mba hahazo angovo izahay rehefa tonga ny fotoana hanadiovana ny trano izay feno loto sy fotaka nentin'ny tondradrano. Tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana no hanaovanay sy Neny an'izany amin'ity indray mitoraka ity… saingy hanao izay tratry ny herinay izahay. Miadana nefa azo antoka……hiverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra.
Tsy ho afaka miasa tsara aho…..mety ho iray volana eo na roa mandra-pilamin'ny zavatra rehetra. Tsy fantatro……tsy mbola voafaritra. Vao avy nametraka an'izay eo an-tanan'Andriamanitra aho izao. Mivavàha ho an'ny fahasalamako e!!
Ny Foibe Fanasoavana Ti-Ratana Penchala dia nanoratra ao amin'ny bilaogin-dry zareo momba ny iraka fanampiana ny tra-boina sahanin-dry zareo:
Izahay, ao amin'ny Fikambanana Ti-Ratana Penchala dia te-hanome tànana ireo mpiasan'ny MCRS (Malaisie Croix-Rouge) izay mikarataka fanampiana ho an'ireo tra-boinan'ny tondradrano ao Kedah, toy ny lamba firakotra, fitafiana, rano fisotro, fanafody Panadol, taratasy famaohana, savony, vary, tantely, trondro am-bifotsy, ronono mandry, dantifrisy, sorgho, sns…
Ndeha isika hifanome tànana hanampy ireo tra-boinan'ny tondradrano. Raisina an-tànan-droa daholo ianareo handray anjara amin'ny sehatra rehetra ary handefa azy ireny amin'ny Foibe Fanasoavana Ti-Ratana Penchala (21, Jalan Penchala, Petaling Jaya, Selangor, Malaisie) hatramin'ny 11 Novambra 2010 alohan'ny amin'ny 5 ora hariva. Handalo eto amin'ny foibenay ny MCRS hàka azy ireny ny marainan'ny 12 Novambra 2010.
Mbola nahita rirany ihany ilay mpitoraka bilaogy Shanmugam Lakshmanan mba hampidirana resaka manàla azy ao anatin'ity zava-midona ity:
Mila miakatra amin'ny toerana avo ianareo. Tsinjonay eny amin'ireny faritra iva voadona ireny fa eritreretina handao ny tranonareo ianareo ka ho any an-tendrombohitra, saingy satria ny tsirairay no hihevitra hanao toy izany ary handrakotra ny arabe, tsaratsara kokoa ho anareo ny mampiasa bisikilety, toy ny nataon'i Elijah Wood. Ary ao amin'ny 2012 [Avy amin'ny mpandika: 2012, ilay sarimihetsika milaza fara andro angamba no lazaina eto], namboarina ny sambo goavambe ary nalefa avy any Himalaya, satria tany no toerana farany ho tratry ny ranobe.
Nisy ihany koa ny antso nalefa tamin'ny governemanta ny mba hanemorana ny Fanadinana Maleziana Hahazoana ny Diplaoma (SPM), izay fanadinam-panjakana atrehan'ny mpianatra rehetra amin'ny ambaratonga faharoa ary mitovy lenta amin'ny O-Level, nefa nolavin'ny governemanta.